Halatra rano “Tsy azo leferina mihitsy”, hoy ny JIRAMA
Saron’ny sampana mpanao «ratissage» ao anatin’ny Fitaleavana misahana ny fiarovana ny fidiram-bolan’ny rano (DPRO) eo anivon’ny orinasa JIRAMA,
omaly ny halatra rano eny amin’ny fokontany Miandrarivo Ambanidia. Raha ny fanazavan’ny DPRO, Rakotonirina Jacques Daniel dia tato anatin’ny iray volana izao no nanao laharam-pahamehana ny fitsirihana ireny toerana ahitana « jerricane » mavo milahatra ireny io sampana io ka izao mody ventiny izao ny rano nantsakaina. Niaiky ny halatra nataony ilay tokantrano ary mbola nilaza ilay renim-pianakaviana fa efa ho roa taona izao no nanaovany io fisintonan-drano tsy miankina amin’ny «compteur» io, izay nohararaotiny tamin’ny fisian’ny fahavakisan’ny fantsona mpitondra rano teny an-toerana. Tato anatin’ny valo volana kosa, hoy izy no nivarotany ny rano halatra amin’ny mponina manodidina. Toy ireny milahatra rano amin’ny paompin’ny daholobe ireny ny mpividy rano ao amin’ity tokantrano ity, izay 50 ariary ny iray «jerricane» mavo ary adiny dimy isan’andro no misokatra ny fivarotana rano eo am-bavahady. Tonga nijery ny zava-misy teny an-toerana ny mpitantana ny orinasa JIRAMA, izay notarihin-dRandriamanana Henri, Tale Jeneraly lefitra ary notronin’ny vaditany ny fidinana ifotony. Tsy azo leferina ny halatra toy izao, hoy izy satria miteraka fatiantoka goavana ho an’ity orinasam-panjakana ity. Hanery ilay tokantrano hanefa ny sarany tokony honerany amin’ny JIRAMA ny mpitantana ny orinasa ary hampiakatra ny raharaha eny anivon’ny fitsarana. Hosaziana ihany koa izay mpiasan’ny orinasa JIRAMA voatonontonona tamin’izao raharaha halatra rano izao.